इतिहास सरलीकरणको जोखिम - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
इतिहास सरलीकरणको जोखिम
श्रावण २६, २०७४- भारतको मध्यप्रदेशमा बाँध प्रभावितहरूको मुआब्जा र पुनर्वासको मागलाई लिएर अनशन गरिरहेकी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकरलाई त्यहाँको प्रहरीले बल प्रयोग गरी अनशन स्थलबाट हटाएर अस्पतालमा भर्ना गरिदिएको छ । उनीमाथि भएको बल प्रयोगलाई लिएर नेपालमा पनि अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता र चासो प्रकट गरिरहेका छन् । यो त्यतिखेर भएको छ, जतिखेर भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७० औं वर्ष मनाउँदैछ । भारतीय स्वतन्त्रताको मूल्यांकन हाम्रोलागि पनि उसको अतीत र वर्तमानको ऐनामा गर्नु मुनासिब हुन्छ । अनि मात्र हामीले आफ्ना छिमेकी भारतको एउटा सग्लो तस्बीर हासिल गर्न सक्छौं ।
स्वतन्त्रताको मूल्यांकन गर्दैगर्दा त्यस कालखण्डको समस्यामाथि पनि दृष्टि दिनुपर्ने हुन्छ र आजको भारतको समस्यासँंग त्यसको तुलना पनि । दुनियाँको सबभन्दा कोलाहलपूर्ण लोकतन्त्रले आफ्नो ७० वर्ष पुरा गरिराख्दा उसलाई आँखीझ्यालबाट चियाउने मात्र होइन, उसका सामथ्र्य र कमजोरीप्रति पनि चासो राख्नुपर्छ । भारतको भूराजनीतिक यथार्थले गर्दा छरछिमेकलाई चटक्कै बिर्सेर भारतको शान्ति, उन्नति र लोकतन्त्र बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी भारतको असरबाट हामी जोगिन सक्दैनौं । हो, असर पार्ने पक्षप्रति पूर्वसजगता र तयारी गरेर त्यसको मात्रालाई न्युन गर्न सकिन्छ । लाभ लिन सक्ने, सिक्न सक्ने कुरालाई नेपालले आफ्नै मौलिक ढाँचामा त्यसलाई ढालेर तागत बनाउन सक्छ । भारतको स्वतन्त्रता संघर्ष र उसको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पगध्वनि नेपालमा पनि गुञ्जिने गरेको छ ।
निर्वाचन नै जननीति
भारत स्वतन्त्र हुने बेला र त्यसपछि पनि कैयौं पक्षबाट भविष्यवाणी हुने गरेको हो– यसले आफ्नो भूगोललाई जोगाउन सक्दैन । तर ७० वर्षको उथल–पुथलपूर्ण यात्राका बाबजुद पनि यसले त्यस्ता अड्कलबाजीलाई झूटो साबित गर्दै आइरहेको छ । भारतसंँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानमा लोकतन्त्रको अविरल धारा बग्न सकेन । तर भारतमा आज पनि आवधिक निर्वाचनले त्यो गतिशील हुँदै आएको छ । आखिर निर्वाचनले नै हो, राजनीतिलाई जननीति बनाउने ।
भारतले पहिलो लोकसभादेखि पछिल्लो १६ औंसम्मको यात्रामा चुनावी प्रक्रियामा निकै सुधार गर्दै आएको छ । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगप्रति भरोसा बढ्दै गएको छ । त्यहाँ पहिलो आमनिर्वाचन सन् १९५२ मा भएको थियो । सुरुको केही दशकसम्मको चुनावी परिणाम र त्यसले निर्माण गरेको केन्द्रीय सत्ताका आधारमा त्यसलाई ‘एक दल प्रधान बहुदलीय व्यवस्था’को नाम दिइएको थियो । तर भारतीय राजनीतिको रूप बदल्न आपत्कालको प्रबल योगदान रहेको छ ।
केन्द्रीय सत्तामा यतिखेर कंग्रेसजस्तै भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व स्थापित भएको छ । जसरी सुरुमा कंग्रेसले केन्द्र र प्रदेशहरू दुवैमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो । सन् ७० पछिको दशकमा कांग्रेसको संगठनात्मक ढाँचामा टुटफुट, क्षेत्रीय समस्याप्रति आँखा चिम्लिनु र केन्द्रको ‘रिमोट कन्ट्रोल’द्वारा प्रदेशहरूको शासन चलाउने प्रवृत्तिले क्षेत्रीय दलहरूको उपयोगितालाई बढायो । यसले आम मानिसको रुझान क्षेत्रीय दल तथा तिनका नेताप्रति बढ्यो । त्यसैगरी यतिखेर भाजपाले विगतमा कंग्रेसले गरेजस्तै राज्यहरूमा बर्चस्व स्थापित गर्ने र सम्पूर्ण राजनीतिलाई आफ्नो परिधिभित्र घुमाउने व्यूह रच्न थालेको छ । उता क्षेत्रीय दलहरू विस्तारै आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन् ।
आजादीको आह्लाद र विभाजनको विलापको साथ इतिहासले जुन कोल्टे फेर्‍यो, त्यसको बहस जारी छ । तर पनि आर्थिक परिवर्तनका साथसाथै सामाजिक परिवर्तन पनि व्यापक भएको छ । स्थानीय तहमा हुने गरेको पञ्चायती चुनावले गर्दा वञ्चित समूहमा संख्याको बलबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने चेतना फैलाउँदै लगेको छ ।
सुरुमा समाजका पिछडिएका र बञ्चितिमा परेका समूह आफ्नो आर्थिक र सामाजिक विपन्नताको कारण राजनीतिमा पनि विपन्न थिए । समय क्रममा बढ्दो चेतनाले गर्दा राजनीतिमा भागिदारीको लडाइँ तिनलाई आफ्नो रोजीरोटीको लडाइँभन्दा सहज लाग्न थाल्यो । कतिपय प्रदेशमा कमजोर वर्गमा यो विचारको सामाजिकीकरण भएको छ कि पहिला राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल गर्ने त्यसपछि आर्थिक हिस्सेदारीको सवाल स्वत: सजिलो भइहाल्छ ।
आठौं दशकको उतराद्र्धमा यस्तो चेतना ह्वात्तै फैलिएको थियो । समाजमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसको माध्यमबाट नयाँ किसिमका नेतृत्वको प्रादुर्भावलाई लोकसभा र विधानसभाको बदलिँदो सामाजिक समीकरणमा हेर्न सकिन्छ । यसले स–साना सामाजिक समूहहरूमा सत्ता–चक्रमा छिर्ने छटपटाहट देखिन थाल्यो । यसलाई कतिपयले लोकतन्त्रको मजबुतीको निसानी ठानेका छन् ।
सुरुवाती चरणमा कंग्रेसको वर्चस्व भारतको केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशहरूमा रहे तापनि दलभित्र पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्तिलाई हौस्याउने गरिन्थ्यो । स्वयम् भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एकपटक भनेका थिए, ‘म सरकारमा नभएको भए के म यस सरकारलाई बर्खास्त गर्न सक्थेँ ?’ त्यतिखेर सदनमा पनि थोरै संख्यामा रहेका विपक्षीले सरकारलाई कठघरामा ल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्थे । ८० को दशकपछि राजनीतिज्ञ र सांसदहरूप्रति सम्मान गर्ने भावना आम भारतीयमा कम हुँदै गएको छ । यसका लागि स्वयम् त्यहाँका राजनीतिकर्मी र दलहरू नै जिम्मेवार छन् । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले नै जनमानसको सम्मान र विश्वास गुमाउन थालेपछि कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि योभन्दा बढी चिन्ता र दु:ख के हुनसक्छ ?
अहिले भारतको प्रादेशिक राजनीति र केही पहिलासम्म केन्द्रीय सत्तामा यो भन्न गाह्रो थियो कि कुन दल कतिखेर सत्तामा रहन्छन् र कतिखेर विपक्षमा ? स्वाधीनता र संसद दुइटै अत्यन्त कोमल बिरुवा हो । त्यसलाई राम्ररी स्याहार–सुसार भएन भने त्यो विस्तारै सुक्न थाल्छ । संसद्को पारम्परिक गरिमा पुन:स्थापित गर्न र फेरि जनमतको आदर प्राप्त गर्न अहिले त्यहाँका दलहरूका निम्ति चुनौतीपूर्ण काम हुँदै गएको छ ।
राजनीति खर्चिलो हुँदै गएको छ र चुनिएर आएकाहरूको पृष्ठभूमि, मनसुवा र आचरणले संसदीय कारबाही अभिव्यक्त हुँदोरहेछ । भारत स्वतन्त्र हुँदा ऊ विभाजित भयो, पाकिस्तान जन्मियो । त्यतिखेर ठूलो धनजनको क्षतिसमेत भयो । स्वतन्त्र भारतमा पनि अल्पसंख्यकहरूले सामुदायिक प्रकोपको सिकार भोग्नु नपरेको होइन । तर तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद पनि आफ्नो यात्रालाई बढाउँदै आएको छ । त्यसैले पनि भारतको एकताको रहस्य र लोकतन्त्रको यात्रा खोजीको विषय हो ।
स्वतन्त्रता एक उत्सव
सेनाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छैन । यस मामिलामा भारत भाग्यशाली छ । तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भारतको विविधता र विशालताले गर्दा त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप हुनबाट जोगाएको छ र सेना भित्रको समावेशी स्वरुप नै उसको वास्तविक तागत बन्न पुगेको छ । कुनै पनि प्रकारको अधिनायकत्व त्यहाँको सामान्य नागरिकले पनि स्विकार्न चाहँदैन । इन्दिरा गान्धीले एकपटक नागरिक अधिनायकत्व ल्याउन खोज्दा त्यो लामो समयसम्म टिकेन । सेनाप्रति त्यहाँको जनसामान्यमा अद्भुत सम्मानको भावना छ । त्यहींनिर नागरिक स्वतन्त्राप्रति गौरवको बोध पनि । यसैले होला, १५ अगस्टमा मनाइने स्वतन्त्रता दिवस एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्छ ।
भारतमा केन्द्र र राज्यबीच सम्बन्धको आफ्नै प्रयोग छ । अभ्यासले राज्यहरूलाई अधिकतम अधिकार प्रयोग गर्ने चेतना फैलाउँदै लगेको छ । अहिले भारतमा विपक्षी अत्यन्त कमजोर भयो भनिन्छ । तर केन्द्रीय सत्ताले साँच्चिकै आफूलाई विपक्षरहित ठान्न थाल्यो भने त्यहाँका जनताले कुनै पनि बखत असाधारण स्थिति खडा गरिदिन सक्छन् । अर्को, त्यहाँ विभिन्न संस्था छन् । तीमध्ये केही अंग्रेजको विरासतमा प्राप्त भएका छन् त केही स्वतन्त्रता पश्चात निर्माण गरिएको छ । एकअर्को संस्थाबीच शक्ति पृथकीकरण र निगरानीले पनि सन्तुलन कायम गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि संस्था विशेषमा अतिक्रमणको मनसुवा जाग्रत हुन पाउँदैन ।
स्वतन्त्रता पश्चात एक त भारतलाई लामो संघर्षको इतिहास उत्तराधिकारमा प्राप्त भएको थियो । सँगसँगै तिनले एकताका सूत्रहरू खोज्न नयाँ प्रतीकहरू निर्माण गरे । संघर्षका अगुवाहरूको छवि निर्माण, उपराष्ट्रियताको कदर, राष्ट्रिय भावनाको प्रसार र समयक्रमसँंगै बदलिँदो आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न तदारुकता देखाए । सिनेमाले पनि समाजलाई जोड्न र मुख्य धारमा ल्याउन ‘ब्रेन वासिङ’को भूमिका खेल्यो, खेल्दैछ ।
यी सबका बाबजुद पनि त्यहाँ जाति व्यवस्था, गरिबी, भिडको उन्माद, निषेधको प्रवृत्ति र घृणाको प्रसार अझै हटेको छैन । आत्मतुष्टि र आत्ममुग्धताबाट जोगिँदै यथार्थ धरातलमा भारतको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतालाई हेर्नुपर्ने नागरिक विमर्श त्यहाँ पनि भइरहन्छ । बहुलतावादी संस्कृति र वैचारिक उदारतामाथि हमला हुँदै गर्दा भारतभित्र यस्ता प्रवृत्तिको स्पेसको आकार स्वत: खोजीको विषय हुनपुग्छ । भारतले कसरी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो र उसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतामा देश स्वतन्त्र भए पनि सामान्य मानिस कतिको स्वतन्त्र हुनसकेका छन् ? महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।
भारत इतिहासको अँध्यारो सुरुङबाट निस्केर उज्यालोको खोजीमा बढेको छ । उसको आन्तरिक संघर्ष र जिजीविषाको लामो कथा छ । यस पृष्ठभूमिमा इतिहासको कुनै पनि प्रकारको सरलीकरणले भारतको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई आघात पुर्‍याउन सक्छ । वर्तमानमा सत्ता स्वार्थको उन्मादको आँखाबाट इतिहासलाई व्याख्या गर्ने, विकसित गर्ने यत्न भयो भने भारतको लोकतान्त्रिक परम्परा यसै रीतिमा बढ्न सक्दैन । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका निम्ति प्रशस्त सम्भावनाको ताकत ऊभित्र छ । उसको आफ्नै अनुभव छ । सत्ता र शक्तिमा समावेशी अनुहार र अत्यधिक केन्द्रीकरणबाट जोगिनु नै सामञ्जस्यको सूत्र हो । स्वतन्त्र भारत अब आफ्नो उत्तरकथा कसरी लेख्छ, त्यसमा नै दक्षिण एसियाको भविष्यको मानचित्र निर्धारित हुनेछ ।
प्रकाशित: श्रावण २६, २०७४
देउवाको दिल्ली–जोखिम र अवसर ›
अध्यादेशको अड्कोपुस ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
जनादेशपछि देउवाको अवरोधपुस ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
भोलि, मिथक र यथार्थपुस ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
वैदेशिक रोजगारीका अलमलपुस ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
१६ दिने अभियानको सार्थकतापुस ३, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नयाँ सरकारको कार्यभारपुस २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
एटीएम सुरक्षित बनाऊपुस २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
मनोस्वास्थ्य अनुकूल कार्यस्थलपुस २, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
राजेन्द्र लिङ्देन : विजातीय गठजोडबाट उदयपुस १, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
नेवानिभित्रका विसंगतिपुस १, २०७४पूरा पढ्नुहोस्